May 14, 2019 - MM Live News
လူတွေရဲ့ အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့သော်လည်း ချီးကျူးမခံရသူ အမေ့လျော့ခံ မြန်မာပိုင်းလော့တဦး မေ့လို့ကျန်ခဲ့မှာကို အားနာပါတယ်လေ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာအမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်းမဖြစ်မီ မြန်မာ့လေကြောင်းခေတ် ကျွန်တော် Fokker-27 (ယခုပြည်သူ့ ဥယျာဉ်ထဲကလေယာဉ်) Copilot ဘဝက လေယာဉ်ဘီးချမရတဲ့ အလားတူ Case မျိုး ပေါ်ပေါက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ Captain က ကျွန်တော့်ဆရာ Capt. Soe Han (San Hoe) Copilot က ဦးတင့်ဆွေ… ရန်ကုန်ကနေ တာချီလိတ်အသွား ဆင်းခါနီး ဘီးချတော့ Nose Wheel ရှေ့ဘီးမကျဘူး။ ခရီးသည် ၄၃ ယောက်… မှောင်ခိုခေတ်ဆိုတော့ Weight ကအပြည့်ထက် လျှံနေတယ်ပေါ့… လေယာဉ်က တော်တော် စုတ်နေပီ ( Landing တခါဆင်းပြီးရင် ဆင်းမစစ်ဘဲ နောက်ခရီးစဉ်သွားဖို့ ခရီးသည်ထပ်မခေါ်ရဲဘူး) […]
ငွေလာဘ်ရွှင်ပြီး ငွေဝင်ကောင်းစေမယ့် ပြည့်ဝချမ်းသာ ရေလုံငွေ ထုပ် ယတြာ
ငွေလာဘ်ရွှင်ပြီး ငွေဝင်ကောင်းစေမယ့် ပြည့်ဝချမ်းသာ ရေလုံငွေထုပ် ယတြာ ပြည့်ဝ ချမ်းသာ ရေလုံငွေထုပ် ယတြာ မိမိဟာ ရသလောက်ငွေတွေ ပြန်ကုန်နေတယ် လာဘ်ပိတ်ပြီး အရောင်းအဝယ် ပါးနေတယ်ဆိုလျင် ဒီ အစီအရင် ယတြာလေးလုပ်ပါ ။ ငွေ ၅၀ တန် သို့မဟုတ် ၅၀၀ တန် သို့မဟုတ် ၅ ထောင်ကျပ်တန်ကို ခေါက်ပါ ပလတ်စတစ်အိပ်သန့်ထဲ ထည့်ပြီး ပိတ်ပါ ။ နောက်ထပ် ပလတ်စတစ် အိပ်ထဲကို ထည့်ပြီး ရေအနည်းငယ် ဖြည့်ပါ ။ အိပ်ကို သားရေကွင်းနဲ့ စည်းပါ ။ စတင် ပြုလုပ်ရမည့် အချိန် နံနက် ၅ နာရီ ၄၅ မိနစ် ဒီငွေအိပ်လေးကို မိမိ ငွေတွေထားတဲ့ […]
မြန်အောင်မြို့နယ်တွင် ဘုန်းကြီးချင်းစကားများဓားခုတ်မှုဖြစ်ပွားပြီး ၁ ပါးပျံလွန်
မြန်အောင်မြို့နယ်တွင် ဘုန်းကြီးချင်းစကားများဓားခုတ်မှုဖြစ်ပွားပြီး ၁ ပါးပျံလွန် ဧရာဝတီတိုင်း၊ မြန်အောင်မြို့နယ်၊ ရေတွင်းကုန်းကျေးရွာ စိတ္တသုခကျောင်းတိုက်မှာ မေလ ၁၂ ရက် ည၂ နာရီခွဲကျော်လောက်က ဘုန်းကြီးချင်း စကားများရာက ဓားခုတ်မှုဖြစ်ပြီး တပါး ပျံလွန်သွားတယ်လို့ ရွှေကျင်ရဲစခန်းမှ တာဝန်ရှိသူတဦးက ပြောပါတယ်။ တကျောင်းတည်းနေထိုင်တဲ့ အရှင်အဂ္ဂဝံသ (လူနာမည်အောင်ဇော်ဝင်း)နဲ့ ဦးစိတ္တိယ (လူနာမည်ဘိုဘို(ခ)ဇော်ဘိုဘိုအောင်)တို့အချင်းများပြီး ဓားခုတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့လို့ အရှင်အဂ္ဂဝံ ပျံလွန်သွားခဲ့တာပါ။ ရွှေကျင်ရဲစခန်း တာဝန်ရှိတဦးက “တရားခံကိုလည်း ဖမ်းဆီးထားပါပြီ။ အရှင်အဂ္ဂဝံသက ခုဓားနဲ့ခုတ်တဲ့ ဦးစိတ္တိယကို ရဟန်းဝတ်နဲ့ အရက်မသောက်သင့်ကြောင်း ဆိုဆုံးမတာ မကျေနပ်တော့ ဓားနဲ့ ခုတ်လိုက်တာ ပါပဲ။ ခုတ်လိုက်တော့ ဝဲဘက်နားရွက် ပြတ်ပြီး လည်ပင်းတဝက်လောက်ထိ ဓားဒါဏ်ရာနဲ့ သေဆုံးသွားတာပါပဲ”လို့ ပြောပါတယ်။ လူသတ်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရွှေကျင်ရဲစခန်းက ရာဇသတ်ကြီး ဥပဒေပုဒ်မလူသတ်မှု […]
နာမည်ကြီးနေတဲ့ သစ်တောတွင်းမှ ကျောင်းဆရာမနဲ့ သူမအဖေါ်အမျိုးသားတစ်ဦး ရုပ်သံ ထိုင်းနိုင်ငံ ဆိုရှယ် မီဒီယာမှာ နံမည်ကြီးနေတဲ့ ရုပ်သံဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် ကန်ချနဘူရီခရိုင် ထုန်ရိုင် နလေစွမ် သဘာဝ သစ်တော တွင်းမှာ ကျားတစ်ကောင်နဲ့ရင်ဆိုင်တွေခဲ့တဲ့ ကရင်တိုင်းရင်းသူ ကျောင်းဆရာမ နဲ့သူမအဖေါ်အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ တောလမ်းမှာ ပိတ်ပြီးအိပ်နေတဲ့ ကျားကိုတွေ့ တာနဲ့ ဆိုင်ကယ်ကိုရပ် ၊ ၀ါးရုံပင်ပေါ်တက်ပုန်းနေရင်း သူမဟာ မကြောက်မလန့်ကျားကို ဖုန်းနဲ့ ရုပ်သံရိုက်ခဲ့တာပါ။SAW https://web.facebook.com/supranee.panasoosun/videos/2230596480326797/?t=52 Karen girls Which has excellent control of consciousness While facing the tiger In the middle of […]
မင်းလှမြို့နယ် Grade3သင်တန်းကမူပြ ဆရာ ဦးစွမ်းထက်မင်း (33နှစ်) မနေ့က မိုးရွာသွန်းစဉ် မိုးကြိုး ထိမှန် သေဆုံးသွားပါတယ် ။ ဆရာရေ Rip ပါဗျာ ညောင်ဦးမြို့နယ် ဝါခင်းကြီး မူလွန်ကျောင်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ကွယ်လွန်သူ ဆရာမကြီး ဒေါ်ခင်မေသန်းသည် G3 သင်တန်းတက်ရောက်နေစဉ်ကာလ 12-5- 2019နေ့က နေပူဒဏ်မခံစားနိုင်သဖြင့် ဆီးချို သွေးထိုး အထက်လှန် အောက်လျော ဖြစ်ကာ ညောင်ဦးဆေးရုံသို့ပြခဲ့ပါသည်။ ယနေ့ 13-5-2019နေ့ မနက် ၅နာရီခန့်က ကျန်းမာရေး ဆိုးရွားလာသဖြင့် တောင်ဇင်းတိုက်နယ်ဆေးရုံသို့ ဆေးကုသမှုခံယူရင်း မနက်၈နာရီ အချိန်ခန့်တွင် ကွယ်လွန်အနိစ္စ ရောက်သွားပါသဖြင့် 14-5-2019နေ့ မနက် ၉နာရီအချိန်တွင် ထနောင်းဝန်း သုသာန်သို့ ပို့ဆောင် သဂြိုလ်ပါမည်။ […]
ဆရာတော်ကြီး၏ အဆောင် တန်ခိုးစွမ်းအား သက်သေ နှစ်ခုတောင် ရှိခဲ့ပါပြီ……….
သင်သတိမထားမိလိုက်တဲ့ မြန်မာပြည်ကလေယဉ်ပျက်မှုနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကယာဉ်တိုက်မှု ရဲ့ တိုက်ဆိုင်ချက် ကံတရားဆိုတာအင်မတန်မှဆန်းကြယ်သလို တချို့ကိစ္စတွေမှာသင်မသိလိုက်တဲ့အချက်လေးကရှိနေပါသေးတယ်..။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ယဉ်တိုက်မှုကြီးမှာကားတစ်စီးလုံးအစိတ်စိတ်အမွှာမွှာဖြစ်သွားခဲ့ပေမယ့်လူကဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးထူးခြားတာက ကာယကံရှင်ရဲ့လက်လေးမှာပတ်ထားတဲ့လက်ပတ်လေးဟာမိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့လက်ပတ်လေးပါ..ဒါကိုလည်းသင်မြင်တွေ့ရမှာပါ..။ နောက်တစ်ခုမြန်မာပြည်မှာလေယာဉ်ဘီးမကျလိုဦးညွတ်ဆင်းခဲ့ရအချိန်မှာလေယာဉ်မှုးရဲ့လက်လေးကိုသတိမထားမိလိုက်ကြပါဘူး…သူနဲ့ MC ရဲ့အင်တာဗျူးလေးမှာအမှတ်တမဲ့တွေ့လိုက်ရတာကတော့မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့လက်ပတ်လေးပါပဲ..။ ဒါဆိုသူရဲ့လေယာဉ်မောင်းနှင်မှုကျွမ်းကျင်တဲ့အပြင်ဒီလက်ပတ်လေးကပေးတဲ့ စွမ်းလို့ရောပြောလိုမရနိုင်ဘူးလားဗျ..ယုံကြည်ကြတဲ့သူတွေရှိသလိုမယုံကြည်ကြတာတွေလည်းရှိပါတယ် .ဒီကိစ္စကိုသင်ဘယ်လိုထင်ပါသလဲ..? akk,mmonlinemedia Unicode ကံတရားဆိုတာအငျမတနျမှဆနျးကွယျသလို တခြို့ကိစ်စတှမှောသငျမသိလိုကျတဲ့အခကျြလေးကရှိနပေါသေးတယျ..။ ထိုငျးနိုငျငံမှာဖွဈပှားခဲ့တဲ့ယဉျတိုကျမှုကွီးမှာကားတဈစီးလုံးအစိတျစိတျအမှာမှာဖွဈသှားခဲ့ပမေယျ့လူကဘာမှမဖွဈခဲ့ပါဘူးထူးခွားတာက ကာယကံရှငျရဲ့လကျလေးမှာပတျထားတဲ့လကျပတျလေးဟာမိုငျးဖုနျးဆရာတျောဘုရားကွီးရဲ့လကျပတျလေးပါ..ဒါကိုလညျးသငျမွငျတှရေ့မှာပါ..။ နောကျတဈခုမွနျမာပွညျမှာလယောဉျဘီးမကလြိုဦးညှတျဆငျးခဲ့ရအခြိနျမှာလယောဉျမှုးရဲ့လကျလေးကိုသတိမထားမိလိုကျကွပါဘူး…သူနဲ့ MC ရဲ့အငျတာဗြူးလေးမှာအမှတျတမဲ့တှလေို့ကျရတာကတော့မိုငျးဖုနျးဆရာတျောဘုရားကွီးရဲ့လကျပတျလေးပါပဲ..။ ဒါဆိုသူရဲ့လယောဉျမောငျးနှငျမှုကြှမျးကငျြတဲ့အပွငျဒီလကျပတျလေးကပေးတဲ့အစှမျးလို့ရောပွောလိုမရနိုငျဘူးလားဗြ..ယုံကွညျကွတဲ့သူတှရှေိသလိုမယုံကွညျကွတာတှလေညျးရှိပါတယျ .ဒီကိစ်စကိုသငျဘယျလိုထငျပါသလဲ..? akk,mmonlinemedia
ထိုင်းဘုရင် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်တွင် မြန်မာအပါအ၀င် နိုင်ငံခြားသား အကျဉ်းသားနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံသားအကျဉ်းသားပေါင်း ၃၀၀၀၀ ကျော် လွတ်မြောက် May13,2019 မင်းဆက် (၁၀) ဆက်မြောက် ထိုင်းဘုရင် မဟာ ဘာဂျီရာ လောင်ကွန်းနန်တက်ပွဲ နဲ့ အတူ အကျဉ်းသားလွတ်ငြိမ်းခွင့် ပေးခဲ့ရာမှာ ပြစ်ဒဏ်ကျအကျဉ်းသားတွေကို မေလ ၁၀ ရက်နေ့သောကြာနေကစတင် လွတ်ပေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတ၀န်း အကျဉ်းသားပေါင်း သုံးသောင်းမှာ ငါးသောင်းအကြား လွတ်မြောက် လာနိုင်ကြောင်း ထိုင်းသတင်းတွေမှာေ၇းသားဖေါ်ပြနေတာတွေ့ ရပါတယ်။ ထိုင်းတနိုင်ငံလုံး ဗဟိုအကျဉ်းထောင်ပေါင်း ၁၄၀ ကျော်မှာ ပြစ်မှုကြီး (မူးယစ်- လူသတ်)တွေ နဲ့ထောင်ကျနေသူ အကျဉ်းသားဦးရေဟာ ၃၂၅၂၉၈ ဦး ရှိနေပါတယ်။ ကမ္ဘာမှာ အကျဉ်းသားအများဆုံး (၆) နိုင်ငံ မှာ […]